* Light Of Myanmar *: ဒီလို ဝေဖန်တာတော့ လက်မခံပါ
Posted by * In Search of Truth * at 12:19 PM
အနူတွေကို ရွာပြင်မောင်းထုတ်လို့ နူနာရောဂါ ပျောက်မသွားပါဘူး။
သူတို့တွေကို သည်းခံ၊ အနစ်နာခံ။ ဂရုဏာထားပြီး ဆေးကုပေးသူရှိမှ ဒီရောဂါ ကမ္ဘာကပျောက်မယ်။
ဒါမှ ငါတို့ဘ၀တွေ တကယ်ငြိမ်းချမ်းသာယာလိမ့်မယ်။
ရွံရှာစက်ဆုတ်စရာတစ်ခုကို မုန်းတီးစွာ ဆန့််ကျင်ရှုတ်ချရုံနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် . . .
လာလည်သွားတာ ကျေးဇူး ကိုဇော်မျိုးရေ .. ကျွန်တော်ကတော့ အသစ်ရေးတိုင်း လာဖတ်ဖြစ်သဗျ ... ဆက်ရေးပါဗျာ အချိန်ပေး ဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ... လက်ခံတာ မခံတာထက် ... စဉ်းစားဖို့ အချက် တစ်ခုလောက် ခေါင်းထဲ ရောက်ရင်ကို မဆိုးပါဘူး အားလုံးကို မျှမျှတတ တွေးစေချင် လုပ်ကိုင်စေချင်တာပါ :)
Nobody like swearing at anything. But nobody know who did it in C boxes. Can you confirm the person who did it? I sawalots of officers from army swear at solders in Burma.
SPDC has been ruling Burma for 19 years. If they can not improve the education, health, economic systems, we all including you should criticize SPDC. They have to take the responsibility. You may remember at the begining of Sep movement, U Myint , adviser for economic and technical development sent email to media, mentioning if gov accepted their advice, the country would be in the state of nearly developed country.The major problem you have to accept is generals are doing management style like an army for all fields.
The other thing people does not like is their crony including their sons & daughters are having huge companies without any evidence of
their effort. They are treated asadifferent class in everywhere without any reasons. They are most corrupted people. The morale of people are down due to them , not by learning the better quality of education or economy of the other countries. The generals and their sons & daughters have to retreat from all fields apart from defense and home office.
အစိုးရဟာသူ ကိုယ်တိုင်(သို့ မဟုတ်) သူ့ အဖွဲ့အစည်းအခုခု (ဥပမာ ဦးပိုင်) က စီးပွားရေးလုပ်ဝင်ရှုတ်နေရင်ဘယ်တော.မှအဲဒီ့နိုင်ငျွံတိုးတက်ပါ
အစိုးရဟာသူ ကိုယ်တိုင်(သို့ မဟုတ်) သူ့ အဖွဲ့အစည်းအခုခု (ဥပမာ ဦးပိုင်) က စီးပွားရေးလုပ်ဝင်ရှုတ်နေရင်ဘယ်တော.မှအဲဒီ့နိုင်ငံမတိုးတက်ပါ
ဆေးမတိုးတဲ့အနူဆေးသောက်ဖို့ ငြင်းနေရင် ချော့ပြောတာလဲမရရင် ပထမဆုံးထိမှာကသူတို့ ဆိုတာမမြင်နိုင်လို့ ပြောနေကြတာပါ။ကြာလာရင်ဘေးလူတွေလဲကူးနိုင်လို့ဘေးက၀ိုင်းပြောပေးနေကြတာပါ။
မ Infant Goddess
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိုင်းလုပ်ပါလို့ ပြောရင် သူတို့ က ပုတီးစိပ်တာနဲ့ တရားထိုင်တာပဲ ပြေးမြင်ကျပါတယ်။ တဖက်လူကို မေတ္တာထားပါလို့ ပြောရင် သူတို့က ဘုရားစင်ရှေ့ကနေ မေတ္တာပို့တာကို ပဲပြေးမြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဆိုလိုတာက တဖက်ကို အဆင့်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ကိုင်ဖို့ပြောနေတာပါ။ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ပဲ နအဖကိုပဲ အတင်းထိုင်တုတ်တော့ သူတို့ပဲ ကျက်ကရေတုံးမှာ မဟုတ်လားဗျာ။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ပြောတာတွေကို သူတို့ လက်မခံဘူးဆိုတာလဲ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တတွေ နှစ်ပေါင်း ၂၀လုံးလုံး စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့တာကိုတော့ သတိထားမိကျပါပြီ။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ ရေးသားချက်တွေဟာ အလွန်ရှိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတာလဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆဲတာလုံးဝ မပါပါဘူး။ အကြောင်းအရာတွေဟာလည်း သူတို့ အတွက် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရ အခုလိုရေးမှ သူတို့ သတိထားမိမှာမို့ အခုလိုပြောနေရတာပါ။ မသင့်တော်မှန်းတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာ
အစ်ကိုရေးထားတာရဲ့ အဓိက လိုရင်းဟာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို အပြစ်မဆိုအောင် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ အစ်ကိုလည်းသိမှာပါ။ အစ်ကိုတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ရေဒီယိုပေါ်မှာပဲ အာကျယ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပဲ ရှိပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ အဖွဲ့တွေ မရှိသေးတဲ့ အချိန် ၁၉၈၈ မှာ အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ အစ်ကိုတို့ဟာ တကယ်တမ်းတော့ နအဖ သက်ဆိုးရှည်ရေးပဲလုပ်နေလို့ပါ။ ကျနော် သက်သေပြပါမယ်။ ဆောင်းပါးတွေ အားလုံးကိုသာ အစ်ကိုဖတ်ရဲပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုမေးထားသမျှကို ကျနော်ဒီမှာ အချိန်ပေးပြီး လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ဖြေကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
(၁) ဒီမိုကရေစီသမားတွေကိုပဲ အပြစ်မတင်ပဲ အစ်ကိုအနေနဲ့ နအဖ အုပ်ချုပ်ရေးညံ့ဖျင်းမှုကိုပါ ဝေဖန်ဖို့ တောင်းဆိုထားတာကို ဖြေကြားပါမယ်ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုပြောပုံက ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အမေဖြစ်သူက ဟဲ့နင့်အစ်ကိုကို ပြန်လုပ်ရသလားလို့ အော်ပါတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသားက “ကျနော်ကိုပဲ ပြောမနေနဲ့။ အမေ့သားကိုလဲ ဆူဦး” တဲ့။ အစ်ကိုလဲ အဲလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကိုပဲ မဆူနဲ့ နအဖကိုလဲ ဆူပါဦးဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်ပြောဖူးပါတယ်။ အစ်ကိုနအဖ အပြစ်ကို ဖတ်ချင်ရင် ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ သွားဖတ်ပါ။ အရည်မဖ အဖတ်မရ နအဖ အတင်းထိုင်တုတ်နေတာ မြင်နိုင်ပါတယ်
(၂) နအဖကြောင့် သုံးမရတဲ့ ပညာရေးကို အတင်းတုတ်တော့ ဘာထူးလာမှာလဲ? အကြံပြုတာ မလုပ်တတ်ရင် ဘာမှ မပြောတာကောင်းပါတယ်။ အလကားနေရင်း လူငယ်တွေ စိတ်ဓါတ်ကျတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်ပြောတာ အစ်ကိုနားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။
(၃) ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ဆေးသောက်ပါကို ချော့ပြောနေတယ်လို့ မပြောသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ နအဖကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ နှစ် ၂၀ လုံးလုံး မဖြစ်လို့ ၀မ်းစာအတွက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ စစ်သားတွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုပါ အစ်ကိုတို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အရှက်ရအောင် လုပ်တာတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောပါမယ်။ မနေ့တနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အစ်ကိုလဲသိမှာပါ
ှုI never said Burmese army is bad. I always criticize the Gov, their crony and the system.
Your blog is like Gov's newspaper in Burma although you are living outside Burma. If you do not like criticism , better stop me or better stop blog writing or do not put comment box in blog like Tharginew.
We all want Gov to change their policy for majority of Burmese people.
ကျနော်ပြောတာ အစ်ကိုနားမရှင်းဘူးထင်တယ်။ အခုဆောင်းပါးဟာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပါးစစ်စစ်ပါ။ နအဖကို ဝေဖန်တဲ့ဆောင်းပါးမဟုတ်ပါ။ အစ်ကိုအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို မဝေဖန်စေချင်တာနဲ့ နအဖဘက်ကို အာရုံပြောင်းနေတာ အစ်ကိုလဲသိမှာပါခင်ဗျာ။
အစိုးရပြောင်းစေချင်တယ်ဆိုတာ ပါးစပ်ကြီးနဲ့ပြောနေယုံနဲ့ ပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အစ်ကိုနား သဘောမပေါက်သေးဘူးထင်တယ်။ လက်တွေ့ကျကျ အစ်ကိုတို့ မလုပ်မချင်းဘယ်တော့မှ နအဖ ဆင်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ အစ်ကိုအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာတော့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ စကားတွေ မပြောသင့်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုအစ်ကို့ကို ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မဆဲပါ။ ရိုင်းဆိုင်းသောစကားကို မပြောပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ သူတို့ ဆီပုံးတွေမှာ ကျနော့ကို ဘန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို မချီးကျူးတဲ့အပြင် ဝေဖန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ံHa Ha There is no body taking trouble to curse this cbox so he has to write about himself.He only deserves swearing words.
သို့ အစ်မ နှင်းစု
ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ဆဲတာရယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာရယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တာရယ် ဒီသုံးခုပဲ လုပ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမှာ http://lightofmyanmar.blogspot.com/2007/10/blog-post_10.html အစ်မတို့ ဒီမိုကရေစီသမားတစ်ယောက် မော်စကိုသား အိုင်ဒီနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဆဲထားတာ ရှိပါတယ်။ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူတွေပဲ အထောက်အထားမရှိပဲ စွပ်စွဲကျတာပါခင်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံး အဆင့်အတန်းမနိမ့်ဘူးဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစ်မဟာ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အထောက်အထား ရှိလို့ပြောတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကျနော့ကို စွပ်စွဲလဲဆိုတာ ရေးပြပါခင်ဗျာ။ စောင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူး
(If we respect to freedom of press and freedom to think, everywhere is surelyanice paradise to discuss intelligently.)
Jeffrey D. Sachs (Director of the Earth Institute at Columbia University) wrote:
America's misguided sanctions against Myanmar, for example, have done nothing in the past year to resolve the country's political and economic crisis. The US and Europe should listen more closely to Myanmar's neighbors, which are keen for Yangon to consolidate the delicate peace processes and createadynamic of political accommodation underanew constitution. Lifting sanctions and giving aid to fight poverty and disease would not beaconcession to power - but steps towards democracy and prosperity.
What did Myanmar's neighbor top ASEAN leader say?
"Even if you do cause pain in Myanmar through sanctions, you're only causing that to the population, to (the) poor and helpless who are already suffering and miserable. You're not going to succeed in causing pain to the leadership or causing the leadership to seriously sit down and talk about reconciliation and work out arrangements which is going to work for Myanmar because regime change sounds good asaslogan but I don't think it's that good asapolicy. It's been tried in Iraq and nobody wants to have an Iraq in Southeast Asia." (In an interview with CNBC)
"'Not only will they not work, but they will be counterproductive, noting that the only place where sanctions worked was in South Africa because the people supported the action and even there it took 10 years for the government to change", said Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong.
Carrot-and-Stick Approach !
The only way to get the reform in Myanmar is foracoordinated, carrot-and-stick approach to be used on Myanmar by all the influential stakeholders. The European Union also said "EU backsa"carrot and stick" approach towards Myanmar. Since 1996, so far, the US and EU have given Myanmar stick after stick rather than carrots. If they believe that punishment is to improve, isn't worthy to reward on Myanmar, with little ignorance on something bad, to make progressive move? Even the bad boys love the praise.
What will our Activists say?
Dr. Lun Swe :
Sayama May Nyein :
Ko lu maw :
Ko Sher Shay :
Ko Nay nat nwe :
Ko Maung dine :
Ko sone si yar :
Ma Kyal sin kyaw :
Ko Soe Htet (Dr.):
Ko Toe htet ( Fair comment maker) :
Ko Padauk myay :
Ko Zaw myo :
Ko Min chin:
Ko Maung suu san :
Ko opposite eyes:
( Don't hesitate to make comment although you are not listed in, I believe this blog granted us freedom to think.This is posted in comment section of koshershay, kopdaukmyay and konaymyo's blog!)
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပြောပြော ဘာတွေလုပ်နေနေ
နိုင်ငံထံက လူထုကတော့ လက်တွေ့ သမားတွေပါဘဲ
ဒို့ ဗမာတွေညံ့တယ်များမထင်ကြပါနဲ့ 